The mixed race or as they are known the 'Coloured' population in Zimbabwe is very small - making up only half of a percent of the population, the majority located in the main urban centres. Many Coloureds have emigrated over the past decade or so and especially as the economy in Zimbabwe collapsed, with sizeable immigrant populations in the UK, Canada and Australia. Apart from the UK, the fact that many of them were experienced tradesmen, due to the limited employment opportunities in the past, assisted in making immigration a little easier than it was for the many of the indigenous African Zimbabwean. The UK's 'one drop' mentality and reduced need for tradesmen made the immigration experiences for all non-white Zimbabweans very similar despite the fact that the vast majority of coloured people are descendants of British citizens. Amongst the Zimbabweans there is a belief that white Zimbabweans, especially after independence and after the farm invasions, were granted legal immigrant status in the UK quite easily.